Igadi | May 2022
Isityalo saseOstreliya esineentyatyambo eziluhlaza sineentyatyambo ezimilise okwengcungcu-Iinkcukacha zeCrotalaria Cunninghamii
Esi sityalo sineentyatyambo ezimile okwe-hummingbird sibizwa ngokuba yintyatyambo eluhlaza okanye intyatyambo yasebukhosini kwaye yeyosapho lwemidumba. Ngokwenzululwazi eyaziwa ngokuba yiCrotalaria cunninghamii, ethiywe ngegama le-botanist yenkulungwane ye-19 u-Allan Cunningham, ityholwana elincinci eliluhlaza livela eMantla e-Australia.
Izityalo ezili-15 eziLungileyo eziKhathalela uMthunzi-Iintyatyambo ezikhulayo kwaye zikhule emthunzini
Ukuba iyadi yakho ineetoni zomthunzi, ezi zizityalo zakho!
Izityalo ezingama-34 ezinokuSinda ngokuKhanya okuPhantsi-Ezona zityalo ziPhambili ziPhakathi ziKhanya ngokuKhanya
Ezi ntlobo zezityalo ezikhanyayo ziphantsi azizukufuna nantoni na enokwenza nefestile yakho esele igcwele. Nazi izindlu ezingaphantsi zokukhanya ezilula ukukhula.
I-25 yeZipho eziBalaseleyo zaBathandi beZityalo-Iingcamango zeZipho eziZodwa zoTyalo
Ukuba uthengela umntu omthandayo otyalwa indlu, yiya kwezi zipho zodwa kubathandi bezityalo ezifana nobucwebe bezityalo, ukubhaliswa kwezityalo kunye nokunye.
Izityalo ezi-15 eziBalaseleyo eziQhakaza ebusika- Iintyatyambo eziKhula kwiCold
Ezi ntyatyambo zintyatyambo zasebusika — ewe, ebusika! —Ukuze ukonwabele umyezo wakho unyaka wonke!
Izityalo ezingama-24 zeGumbi lokuhlambela eziBalaseleyo- Izityalo zokuFuma eziPhezulu
Ezi zindlu zizakuphumelela kumanqanaba aphezulu okufuma kwindawo yakho yokuhlambela, kwaye kukho iindlela zokuhlambela ezizaliswe ngokukhanya kunye neendawo zokuhlambela ezingenafestile nazo.
Iintyatyambo ezi-12 ezigqibeleleyo zokutyala intwasahlobo-Nini ukuTyala iiDaffodils, iTulips, iRhododendrons, kunye nokunye
Emva kobusika obude, obumnyama, ulungele umbala othile! Nazi iintyatyambo ezintle onokuzityala entwasahlobo.
Iiherbs ezilula ukukhula kwiiGadi zangaphakathi nangaphandle
Eyona imifuno ilungele ukupheka, iioyile ezifanelekileyo, iti yemifuno, iaromatherapy kunye nokugxotha izinambuzane. Ungayityala njani incasa yesinongo kunye nembewu yeziqholo kunye namayeza anceda izityalo zikhule kwaye zenze ivumba elitsha entwasahlobo.
Ungawugcina njani umthi wamakhiwane weFiddle Leaf uphila-Iingcebiso zokuKhathalela ukuTyala kweZityalo
Akukho sidingo sokuba nomona ngeebhlog kunye nezityalo zazo ezigqibeleleyo ezintle kwi-Instagram. Nokuba awunaso isithupha esiluhlaza, nantsi indlela yokugcina isityalo samakhiwane samagqabi siphile kwaye sichuma.
Ukunyamekelwa kweMithi yeMali-Indlela yokuKhulisa isiTyalo seMithi esiNethamsanqa
Funda ukuba ungawugcina njani umthi wakho wemali usempilweni kwaye ukhula nokuba awunaso isithupha esiluhlaza.
Rucculents eziRose eziPinki ziyathengiswa e-Etsy
Ezi zinqabileyo ze-Greenovia succulents, aka 'rose rose' enencasa, ijongeka ngathi ziiroses, kwaye ziyafumaneka e-Etsy. Lumka, nangona-bathengisa ngokukhawuleza!
Ungayinyamekela njani iMonstera Deliciosa, iSityalo saseSwitzerland setshizi
I-Monstera deliciosa, ekwabizwa ngegama eliqhelekileyo lesityalo saseSwitzerland, sisongezo esimangalisayo nakweliphi na igumbi. Nantsi indlela yokunyamekela esi sityalo sithandwayo.
Ukutyala ngo-Agasti-10 iintyatyambo kunye nemifuno onokuyityala ngo-Agasti
Ukulungele ukufumana igadi yakho yokuwa ihamba? Usenokutyala ezinye izidlo zexesha elifutshane kunye nezinye izihombiso ukuze uvuselele iibhedi zeentyatyambo ezibunayo.
Iingcamango ezili-10 zangaphambili zoTyalo lwezityalo - Izityalo eziPhambili zokuNgena kwakho
Ukuba ujonge ukufomatha umnyango wangaphambili ngezityalo, ezi zimvo ziya kukukhuthaza, ukusuka kwiiplanga ezinomthunzi ogqibeleleyo wesiNgesi ukuya kwiminyango enelanga apho icacti iza kukhula.
Izityalo zegumbi lokulala ezili-10 zokuNceda ukukunika eyona Ndawo yokulala ilungileyo
Kuyothusa kodwa kuyinyani: Ezinye izityalo zokulala zinokukunceda ulale ngokukhawuleza. Ezi zezona zifanelekileyo zokuqwalaselwa.
AbaTyali boMbane abaPhakathi abangama-20 abaLungileyo- Iimbiza zezityalo eziThintelweyo zangaphakathi
Izityalo zakho zifanelwe kokona kulungileyo! Nokuba ufuna into yanamhlanje, enemibala, okanye ubuchwephesha obuphezulu, kukho isixhobo sokutyala ngaphakathi kuwo wonke umntu olapha.
I-17 yeeNdawo zeHindu zeNdlu zangaphakathi 2021 - Abatyali beHerb Herb Siyabathanda
Ezi zityalo zemifuno zangaphakathi ziyakukhangeleka zibulala ekhitshini lakho kwaye zigcine ukutya kwakho kungcamla kutsha unyaka wonke.
Apho Thenga khona Izityalo kwi-Intanethi- Yenza iOda yezityalo ezingabizi kwi-Intanethi
Ukusuka kwizityalo zomoya kunye nee-succulents ukuya kumakhiwane egqabi lefiddle, ungathenga izinto ozithandayo zendlu kwi-intanethi kwezi venkile, kubandakanya i-Etsy, iAmazon, iSill, kunye nezixhobo ezimbalwa ezimangazayo.
Imifanekiso entle yeentyatyambo ezingama-33-Ezona ntlobo ziNtyatyambo ziGadi yakho
Nokuba ufuna izimvo ezintsha ngegadi yakho, ufuna ukutshintsha iphepha lodonga libe ngumfanekiso weentyatyambo, okanye ufuna ukujonga imifanekiso yeentyatyambo ezintle, siqokelele iitoni zemifanekiso yeentlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo eziya kukhazimla nakweyiphi na imbonakalo yomhlaba. Ukusuka kwi-tulips ukuya kwi-sunflowers ukuya kwiiroses, le mifanekiso yeentyatyambo ezintle iqinisekile ukukhuthaza isithupha sakho esiluhlaza sangaphakathi.
Iinyani ezili-16 zeCherry Blossoms - iCherry Blossoms kunye neBlossom Tree Trivia
Iintyatyambo zeCherry zinemvelaphi engummangaliso.
hgtv smart pittsburgh
imibono yokuhlamba indawo encinci
umbala odumileyo kwigumbi lokulala